डनको पैसा एआईजीमार्फत क्रसरमा लगानी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
डनको पैसा एआईजीमार्फत क्रसरमा लगानी
प्रकाशित मिति १३ मंसिर २०७५, बिहीबार १४:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । अवकाशको मुखमा पुगेका नेपाल प्रहरीका अधिकांश अधिकारीहरुको क्रसर र टिपरमा लगानी रहेको तथ्य खुलेको छ । सवारी दुर्घटनामा डिआईजी सुशीलकुमार भण्डारीको मृत्युपछि उनको क्रसर उद्योग र टिपरमा लगानी रहेको कुरा बाहिर आयो ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार डिआईजी भण्डारीको मृत्युपछि विभिन्न क्रसर उद्योगमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा एक वहालवाला एआईजीसहित दर्जनौ प्रहरी अधिकारीहरुको लगानी रहेको तथ्य समेत भेटिएको छ । प्रायजसोः जिल्लामा प्रहरीको कमाई खाने भाँडो नै बनेको छ, क्रसर र बालुवा खानी ।
अधिकांश प्रहरी अधिकृतले गुण्डा नाइकेहरुसँग साझेदारी गरेर क्रसर सञ्चालन गरी करोडौं कमाइरहेका छन् । जसका कारण अवैध क्रसर उद्योगहरु निरन्तर चलिरहेका छन् ।
दक्षिणकाली भन्दा तल छैमलेमा एक एआईजीले मधुसुदन डोटेल नामका गुण्डामार्पmत क्रसरमा लगानी गरेका छन् ।
उक्त क्रसर उद्योग केही समयमै सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रय्राकको काम लिने गरी उक्त क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । वर्षौंदेखि ललितपुरका टिकाभैरव, लेलेको नल्लुखोला किनारलगायतका विभिन्न स्थानमा अबैध रुपमा खानी सञ्चालन गर्दै आएका डोटेलले निराकार ढुंगा उद्योग प्रालिको नामबाट काम गर्दै आइरहेका छन् ।
उनै डोटेललाई ति एआईजीलगायतका प्रहरी अधिकारीहरुले लगानी गरेर वर्षौंदेखि कमाउँदै आइरहेको स्रोत बताउँछ । शरद गौचन हत्याका नाइके समिरमानसिंह बस्नेतलाई सेटिङ मिलाएर भारतबाट नेपालमा ल्याउँदा असुलेको करोडौं रकम र मनोज पुनबाट बरामद भएको रकमसमेत डोटेलको क्रसरमा लगानी गरिएको स्रोतले थप उल्लेख ग-यो ।
ललितपुर क्रसर व्यवसायी संघको अध्यक्ष छँदा डोटेल गुण्डा नाइके रमेश बाहुनको पार्टनर थिए । ढुंगा खानीको विषयमा विवाद हुँदा बाहुनले मिनकृष्ण महर्जनमाथि गोली चलाएपछि डोटेल पनि प्रहरी अनुसन्धानमा तानिए । त्यसबेला ६ महिना जेल बसेर बाहिर निस्किएपछि डोटेलले एकाएक प्रहरी अधिकारीहरुसँग मिलेर क्रसरको लगानीलाई बढाए ।
जब रमेश बाहुन जेल परे त्यसपछि डोटेल गुण्डा नाइके बस्नेतसँग नजिकिन पुगे । पछिल्लो समय डोटेलकै मध्यस्थतामा नख्खु कारागारमा रहेका बाहुन र केन्द्रिय कारागारमा रहेका बस्नेतबीच राम्रो सम्बन्ध बनेको छ ।
पुन र बस्नेतबाट कति उठाइयो ?
केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) र रुपन्देही प्रहरीले गरेको संयुक्त कारवाहीमा मारिएका थिए, गुण्डा नाइके मनोज पुन र सोमबहादुर आले । प्रहरीले गरेको इन्काउन्टको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि आयोगले कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
मनोज पुन प्रहरीको मोस्टवान्टेड सूचीमा थिए । उनले फर्निचर व्यवसायी बसन्त पौडेलको हत्याको जिम्मेवारी लिएका थिए ।
२०७२ पुसमै युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्याको जिम्मा समेत उनैले लिएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्यामा पनि उनको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी थियो ।
त्यतिखेर पुष्कर कार्की नेतृत्वको सिआईबी र तत्कालीन डिआईजी गणेश केसीको छानविन समितिले भने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार समिरमान बस्नेत रहेको निश्कर्श निकालेको थियो ।
बस्नेतलाई इन्काउन्टरबाट जोगाएर त्यतिखेर सिआइबीको टोलीले अचानक सार्वजनिक गरेपछि गौचन हत्याको अनुसन्धानका लागि बनेको छानविन समिति नै चकित परेको थियो ।
पुनलाई दाउद इब्राहिमकै शैलिमा प्रचार गराएका कार्कीले पुनले को–कोसँग कति फिरौती असुलेका थिए र कति रकम अबैध रुपमा आर्जन गरेका थिए भन्ने बारेमा केही पनि खुलाउन सकेका थिएनन् । तर, उनले करोडौं असुलेको दावी गरेका थिए ।
पुन भारतको गोवामा पक्राउ परेको एक साता अघि नै उनलाई छुटाउने नाममा हङकङ, दुबइ र मकाउबाट पुनका सहयोगीहरुले दुई करोड रकम हुण्डी गरेर पठाएको हल्ला चलेको थियो । उक्त रकम कसले खायो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म पनि तथ्य बाहिर खुलेको छैन । तर, पुनबाट रकम असुलेर उनैलाई इन्काउन्टरको नाममा मारियो भने बस्नेतलाई सेटिङमा काठमाडौं ल्याएर एकाएक सर्वाजनिक गरिएको थियो । अहिले बस्नेत प्रहरीकै लागि टाउको दुःखाईको विषय बनेका छन् ।
हाई प्रोफाइल व्यक्तिको हत्याको योजनामा रहेका उनलाई प्रहरी अधिकारीहरुकै संरक्षण रहेको छ ।
कार्कीले समिरमानलाई सार्वजनिक गर्दा भनेका थिए–‘उसको समूहले इन्टरनेट, फेसबुक भाईबर जस्ता प्रबिधिमार्फत नेपालका ब्यापारीहरुलाई धम्क्याएर रकम असुल्थे ।’ तर, धम्क्याएर बस्नेतले कति असुले भन्ने बारेमा केही कुरा बाहिर नआएपनि असुलिएको उक्त रकम भने अहिले मिलेमतोमै क्रसरमा लगानी भएको खुलेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
यसरी हुदै छ पाइपमा पानी राखेर प्रेसर चेक(फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानोपनी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले मेलम्चीको पानी काठमाडौंको सुन्दरीलमा झरेपछि उपत्यकावासीलाई चाडो पानी घरघर पुर्याउनलाई छाइप…
बसले किचेर तनहुँमा एकको मृत्यु
दमौली । तनहुँमा आज (शुक्रबार) बिहान बसले किचेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४…
नेकपाका नेताहरुको कार्यविभाजन अन्तिम तयारीमा
काठमाडौँ । पार्टी एकिकरण भएको चार महिनापछि नेकपाले बल्ल नेताहरुको कार्यविभाजन तयारी गरेको छ । पार्टी एकतापछि झण्डै साढे…
प्रधानमन्त्रीको जिल्लामै निर्मला प्रकरण भाग–२ घटेपछि…
झापा । कोकको बोतलमा रक्सी मिसाएर दुई युवकले भद्रपुरकी एक किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
किन बढ्दैछ सेनामा निराशा ? आत्महत्या बढ्दो
काठमाडौं । नेपाली सेनामा आत्महत्याको क्रम बढ्न थालेपछि सैन्य मुख्यालय चिन्तित बनेको छ । जंगीअड्डाले कारण पहिचान गरी आत्महत्या…
सुनको मुल्यले अहिलेम्मकै रेकर्ड तोड्यो, आज १५ सयले बढेर ८० हजार नाघ्यो 29 views